Fedora Silverblue: Nidaamka Hawlgalka Miiska ee aan la beddeli karin oo xiiso leh | Laga soo bilaabo Linux
Fedora Silverblue: Nidaamka Hawlgalka Miiska ee aan la beddeli karin oo xiiso leh
Linux Post Ku Rakib | 23/09/2021 06:00 | La cusbooneysiiyay 23/09/2021 12:17 | Qaybinta, GNU / Linux
Sidii aan u ballan qaadnay waqti yar ka hor, qoraalkeenna oo loogu magac daray «Mashruuca Fedora: Ogaanshaha Bulshadaada iyo Horumarinteeda Hadda«Maanta waxaan dhex geli doonnaa mid ka mid ah mashaariicdeeda ama horumarkeeda, oo la yiraahdo "Fedora Bluesilver".
"Fedora Bluesilver" doonaya inuu noqdo a Nidaamka hawlgalka ee aan la beddeli karin (aan la beddeli karin) kombiyuutarrada waa inay ahaadaan goobaha shaqada ee GNU / Linux waana inay adeegsadaan xirfadlayaal, inta badan horumariyayaal iyo kuwa kale ee la xiriira Sayniska Kombiyuutarka, iyadoo ay ugu wacan tahay taageerada sare ee la xiriirta adeegsiga weelasha.
Mashruuca Fedora: Ogaanshaha Bulshadaada iyo Horumarinteeda Hadda
Kuwa danaynaya sahaminta nimcada post la xiriira hore con Mashruuca Fedora iyo curintiisa kala duwan, waxaad gujin kartaa xiriirka soo socda, ka dib markaad dhameyso akhriska daabacaddan:
“Mashruuca Fedora waa uHal -abuur cusub, bilaash ah oo furan oo loogu talagalay qalabka, daruuraha iyo weelasha u saamaxaya soo -saareyaasha softiweerka iyo xubnaha bulshada inay u dhisaan xalal u gaar ah adeegsadayaashooda. Si kale haddii loo dhigo, waa beel dad ah oo ka wada shaqeynaya sidii loo dhisi lahaa madal softiweer il furan oo furan, iyo in la iska kaashado lana wadaago xallinta adeegsadaha ku dhisan madalkan. ” Mashruuca Fedora: Ogaanshaha Bulshadaada iyo Horumarinteeda Hadda
1 Fedora Silverblue: Waxay ku habboon tahay qulqulka shaqada weelka ku jihaysan
1.1 Waa maxay Fedora Silverblue?
1.3 Qaddarin shaqsiyeed
Fedora Silverblue: Waxay ku habboon tahay qulqulka shaqada weelka ku jihaysan
Waa maxay Fedora Silverblue?
Qoraalkii hore ee ku saabsanaa "Mashruuca Fedora", waxaan si kooban u sheegnaa taas "Fedora Bluesilver" es:
"Nidaamka Hawlgalka desktop-ka oo aan la beddeli karin (aan la beddeli karin) oo loogu talagalay inuu bixiyo kaalmo wanaagsan oo ku aaddan qulqulka shaqo ee xudunta u ah. Kala duwanaanshahaan Fedora Workstation wuxuu bartilmaameedsadaa bulshooyinka horumariya."
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay dabeecad aan isbeddelin, waa in la ogaadaa inay runtii tahay:
"Kala duwanaansho Fedora Workstation. Markaa waxay umuuqataa, dareemeysaa, oo u dhaqmeysaa sida nidaamka hawlgalka desktop -ka caadiga ah, waayo -aragnimadu waxay la mid tahay tan la helay iyadoo la adeegsanayo goob shaqo oo Fedora ah."
Iyo caddeynta taas, marka laga hadlayo is -beddel la’aanta "Fedora Bluesilver" tixraaca waxaa loo sameeyey:
"Rakibaadda kasta ee Fedora Silverblue waxay la mid tahay rakibaadda kale ee isla noocaas ah. Habka Operating -ga ee ku jira diskka ayaa si isku mid ah mishiin kale ugu socda, weligiisna isma beddelo marka la isticmaalayo."
Waxaa ka mid ah astaamaheeda muuqda waxaan xusi karnaa kuwa soo socda:
Naqshad aan la beddeli karin oo loogu talagalay xasillooni dheeraad ah, khalad yar oo u nugul Oo sidaas daraaddeed way fududahay in la tijaabiyo oo la horumariyo.
Meel aad u fiican oo loogu talagalay codsiyada haynta, iyo sidoo kale horumarinta softiweerka ku saleysan weelka.
Codsiyadaada (barnaamijyada) iyo weelasha waxaa lagu hayaa si gooni ah nidaamka martida loo yahay, taasoo hagaajinaysa xasilloonida iyo isku halaynta.
Cusboonaysiintooda ayaa degdeg ah mana jirto wax sugitaan ah inay rakibaan. Dib -u -bilowga si caadi ah ayaa ku filan inaad ku raaxaysato nooca xiga ee la heli karo ama aad dib ugu noqoto nooc hore, haddii loo baahdo.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "Fedora Bluesilver" waad booqan kartaa qaybta download ku saabsan "Mashruuca Fedora". Oo ku saabsan isaga qaybta ugu weyn ee rasmiga ah In xiga isku xirka. Meesha wax badan ka jiraan dukumeentiyo la heli karo gaar ahaan rakibidda iyo isticmaalka. Oo ku saabsan macluumaad farsamo taas oo ay ku gaadhayso tiknoolajiyadeeda aan la beddeli karin qalabeed kaas oo ay ku maamusho isticmaalka weelasha, si loo gaaro faham caalami ah oo qoto dheer oo ku saabsan horumarka la sheegay.
Xaqiiqdi, "Fedora Bluesilver" waa abuuris weyn oo loogu talagalay isticmaaleyaasha had iyo jeer u baahan abuuro / rakib / beddel / tijaabiso codsiyada iyo nidaamyada on your Operating System. Tan iyo, awood u lahaanshaha si joogto ah u fulin kara falalka noocaas ah cabsi la'aan iyo welwel toona si xun u beddela ama u dhaawacma Nidaamka Hawlgalka loo adeegsaday, runtii waa a lagu daray qiimo badan marka ay timaaddo shaqada ama hawlaha muhiimka ah.
Y "Fedora Bluesilver" waxay iga dhigaysaa inaan wax badan ka fikiro, ku saabsan Jawaab -celinnada lagu abuuray GNU / Linux Distros sida MX o AntiX.
Tan iyo, ugu yaraan xagga rakibidda, natiijada ugu dambeysa ee rakibidda Respin had iyo jeer waa isku mid. Taasi waa, nuqul sax ah oo ah nidaamka la abuuray. In kasta oo aanay ahayn kuwo aan la beddeli karin, haddana waxay oggolaadaan in si deg -deg ah loo rakibo ISO laga abuuray sawirka iyo ekaanshaha Nidaamkayaga Hawlgalka. Oggolaanshaha in la haysto ama dib loo soo celiyo sidii aan mar walba rabno inaan u isticmaalno.
Soo koobid, "Fedora Bluesilver" hadda waa mid ka mid ah curinta ugu xiisaha badan ee "Mashruuca Fedora". Tan iyo markii, waxay raadineysaa inay noqoto mid aad u badan deggan oo lagu kalsoonaan karo sida Nidaamka Hawlgalka Shaqada, gaar ahaan xirfadleydaas horumariyaasha, iyo kuwa isticmaala qulqulka shaqo ee diiradda la saarayo weelasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Fedora Silverblue: Nidaamka Hawlgalka Miiska ee aan la beddeli karin oo xiiso leh
Waxaan ahay isticmaale Silverblue runtiina, maahan sidii adeegsiga distro caadi ah. Qaabka loo maareeyo ayaa gebi ahaanba kala duwan waxaanan tixgelinayaa Silverblue mustaqbalka linux distros;
Waad ku mahadsan tahay maqaalkan si fiican ayaa loo sharxay
U jawaab Paul Cormier CEO Red Hat, Inc.
Salaan, Bawlos. Waad ku mahadsan tahay faalladaada waxaan aad ugu faraxsanahay inaad ka heshay. Ma heli karin inaan ka shaqeeyo MV, si aan u sii baaro. Waxaan u maleynayaa inaysan ku shaqeynin MV, sax?
Salaan, waligey kuma rakibin MV. Waxaan haystaa kombiyuutarro dhowr ah midna waxaan ku haystaa qalin -qalin ....
In kasta oo haddii aan wax ka akhriyay dhibaatooyinka ku saabsan mashiinnada dalwaddu, ma aqaan haddii aad rabto inaad ku khayaamiso sanduuqyada, laakiin halkan YouTuBe ayaa qof ku rakibaya qalin -qori oo ka dhiga inay shaqeyso, ma aqaan haddii aad rabto inaad fiiriso oo eeg haddii ay adiga kuu shaqayso: https://www.youtube.com/watch?v=AeNKlIizUFc
Salaan ka timid Colombia
Salaan, Bawlos. Waad ku mahadsan tahay faalladaada iyo waxtarkaaga. Isku day mar kale adoo adeegsanaya VirtualBox adoo raacaya tilmaamaha fiidiyaha waxna ma jiraan. Kadib waxaan isku dayi doonaa Sanduuqyada.
Adeegga Epic Games 'Adeegga Ka-hortagga Khiyaamaynta fudud wuxuu hadda la jaan qaadayaa Linux iyo Mac
Ubuntu Touch OTA-19 mar hore ayaa la sii daayay oo kuwanu waa warkeedii